Arakaraka ny tolotra sy tinady… | NewsMada
Mafanafana ratsy ny fampielezan-kevitra. Miseholany ny teny tsy tsaroana afitsoky ny sasany, ny famohazana fota-mandry, ny fanaratsiana… Ady farany fandresen-dahatra izao. Iza no handresy? Arakaraka ny safidin’ny besinimaro na ny maro anisa io. Nefa miankina be dia be amin’izay atolotry ny kandidà tsirairay avy ny fironana sy ny fanapahan-kevitry ny mpifidy. Izay ilay hoe inty sy inday, tolotra sy tinady.
Tena mifanandrify amin’izay zava-dehibe sy mahamaika ny vahoaka ve, ohatra, ny vinam-piarahamonina sy ny fandaharanasa andresen-dahatra azy? Tsy itompoana teny fantatra, na atao savoandanitra, na letrezana… Izay miainga amin’ny zava-misy sy ny hetahetan’ny vahoaka ifotony no mety handresy lahatra azy: ny tsy fandriampahalemana, ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fandrobana tany, ny kolikoly…
Manginy fotsiny ny raharaham-pirenena tsy ananan-kavana. Mba tsy hoe lasa fananana manokan’ny mpitondra i Madagasikara, ka manjakazaka ny tapaka sy namana: tsimatimanota, velon’ny kiantranoantrano… Inona ary aiza izay tena vahaolana mahomby sy maharitra amin’izany? Eo koa ny fivarotan-tanindrazana, ny fandroban’ny vahiny ny harem-pirenena… Hisy ve ny fiovana sy fanovana?
Mila mazava amin’ny vahoaka ifotony ny amin’izany, ankoatra ny fandaharanasa hafa. Tsy misy na mila tambiny hafa izay vato harotsaka amin’izany, afa-tsy ny asa mivaingana rehefa voafidy eo ny tena. Tokony ho izay koa no antony fototra amin’ny safidin’ny tsirairay, arakaraka ny tolotra sy ny tinady. Ny fandaharanasa no hanolorana vato, fa tsy tsangan’olona, na fanomezana, na kabary tsara lahatra…
Tsy noterena ireo mirotsa-kofidina; eny, na toy inona fanazavan-kevitra ny amin’izay. Tsy azo terena amin’ny safidiny koa ny tsirairay, manana izay zava-dehibe sy mahamaika azy: tsy voatery na terena hitovy sy hifanandrify amin’ny an’ny kandidà. Eo ny maha fifanarahana ny fifidianana, tsy vitan’ny latsa-bato sy ny fahazoana fahefana fotsiny fa hitakiana tamberin’andraikitra atsy ho atsy.